မရိုင်းယား ကဲရီ - ဝီကီပီးဒီးယား
၂၀၁၈ နိုဝင်ဘာ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတစ်ခု၌
(1969-03-27)မတ် ၂၇၊ ၁၉၆၉ or 1970 (age 52–53)
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ နယူးယောက်မြို့၊ လောန်ဂိုင်းလန်းကျွန်း(Long Island)
၁၉၈၉ – လက်ရှိ
အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း (၅၂၀) (၂၀၁၈ ခန့်မှန်းမှု)
ဆန်ကာတင်ရွေးချယ်ခံရမှုနှင့် ဆုများကို ကြည့်ရန်
မရိုင်းယား ကဲရီ (အင်္ဂလိပ်: Mariah Carey) (မတ်လ-၂၇-၁၉၆၉ (သို့) ၁၉၇၀ တွင်မွေးဖွား) သည်အမေရိကန်အဆိုတော်၊ တေးရေးဆရာ၊ တေးထုတ်လုပ်သူ၊ သရုပ်ဆောင်၊ စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရှင်နှင့်ပရဟိတစေတနာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ဂင်းနစ် ကမ္ဘာ့စံချိန်မှတ်တမ်း မှ Songbird Supreme ဟုရည်ညွှန်းကာ သူမသည် သံစဉ်ရှစ်ခုတွဲရှိသော နယ်ပယ်ငါးခုအတွင်း(five-octave) သီဆိုနိုင်စွမ်းရှိခြင်း၊ melismatic သီဆိုဟန်၊ လူသားတစ်ဦးသီဆိုနိုင်သော အမြင့်ဆုံးသံစဉ် (whistle register)ကို အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ကျော်ကြားသည်။ ၁၉၉၀ ကိုလံဘီယာတေးသံသွင်းအတွက် သီချင်းဆိုခြင်းနှင့် ကိုယ်ပိုင်အမည်ဖြင့် ပွဲဦးထွက် တေးအခွေထုတ်ဝေပြီးနောက် ကျော်ကြားလာခဲ့သည်။ ထိုပွဲဦးထွက် အခွေသည် ဘီလ်ဘော့ဒ်ဇယား (၂၀၀)တွင် ရက်သတ္တပတ် (၁၁)ခုမျှ ထိပ်ဆုံး၌ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့သည်။ များမကြာမီ ကဲရီသည် သူမ၏ပထမဆုံးသီချင်းငါးပုဒ် "Vision of Love" မှ "Emotions"ထိ သီချင်းများသည် ယူအက်စ်ဘီလ်ဘော့ဒ် ရေပန်းစားသီချင်းများ (၁၀၀)တွင် နံပါတ် (၁)နေရာရရှိခဲ့သည့် ပထမဆုံး တေးသံရှင်လည်းဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဆိုနီဂီတဖျော်ဖြေရေးကုမ္ပဏီ (Sony Music) အကြီးအကဲ Tommy Mottola နှင့်လက်ထပ်ပြီးနောက် ကဲရီသည် အောက်ပါတေးသီချင်းအခွေများဖြင့် ကမ္ဘာအနှံ့အောင်မြင်မှုများရရှိလာခဲ့သည်။ အခွေများမှာ Music Box (၁၉၉၃)၊ Merry Christmas (၁၉၉၄)၊ နှင့် Daydream (၁၉၉၅) တို့ဖြစ်ကြသည်။ ဤအခွေများတွင် ကဲရီ၏ အအောင်မြင်ဆုံးတေးသီချင်းများဖြစ်သော သူရဲကောင်း (Hero) ၊ မင်းမရှိဘဲ (Without You) ၊ ခရစ်စမတ်မှာ အလိုချင်ဆုံးက မင်း (All I Want for Christmas Is You)၊ စိတ်ကူးယဉ် (Fantasy)၊ အမြဲတမ်း မရဲ့မောင်လေး(ဖြစ်စမ်းပါ) (Always Be My Baby)၊ ချိုမြိန်သောနေ့တစ်နေ့ (One Sweet Day) တို့သည် ၁၉၉၀နှစ်များ၏ ယူအက်စ်အကောင်းဆုံးတေးများဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ Mottola နှင့်လမ်းခွဲပြီးသည့်နောက် ကဲရီသည် ပုံရိပ်သစ်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး သူမ၏ဂီတပုံစံထဲသို့ ဟစ်ဟော့ ဂီတ အခြင်းရာများကို ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းခဲ့ကာ လိပ်ပြာ (Butterfly) အမည်ရှိ တေးအယ်လ်ဘမ်ကို ၁၉၉၇တွင် ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ဘီလ်ဘော့ဒ်က သူမအား ၁၉၉၀နှစ်များ၌ နိုင်ငံ၏ အအောင်မြင်ဆုံး အနုပညာရှင်ဟုခေါ်ဝေါ်ခဲ့သလို ကမ္ဘာ့ဂီတဆုကလည်း သူမကို ယင်းနှစ်များ၏ ကမ္ဘာ့ရောင်းအားအကောင်းဆုံး တေးသံသွင်းအနုပညာရှင်အဖြစ် ဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။
ယူအက်စ်တွင် တစ်ကိုယ်တော်သီချင်း အဆင့်တစ်ချိတ်သောနှစ် (၁၁)နှစ်ဆက်တိုက်ရရှိပြီးနောက် ကဲရီသည် ကိုလံဘီယာ(တေးသံသွင်း)နှင့် လမ်းခွဲကာ ဗားဂျင်တေးသံသွင်း(Virgin Records)နှင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း(၁၀၀)တန်ဖိုးရှိသော တေးသံသွင်းစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် သူမ၏ ရုပ်ပိုင်း၊ ခံစားချက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှုကို ကြေညာခံခဲ့ရခြင်း၊ ၂၀၀၁ခုနှစ်ထွက် Glitter ရုပ်ရှင်နှင့် ထိုရုပ်ရှင်ဇာတ်ဝင်တေးတို့၏ စီးပွားရေးအရ မအောင်မြင်မှုများပြီးနောက် ဗားဂျင်တေးသံသွင်းက သူမ၏စာချုပ်ကို သန်း(၅၀)ပေး၍ ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ကဲရီကလည်း အိုင်းလန်းတေးသံသွင်း(Island)နှင့် နောက်တစ်နှစ်၌ စာချုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့မအောင်မြင်ဖြစ်ခဲ့ရသောကာလများပြီးနောက် သူမ၏ မီးမီ၏ လွတ်မြောက်လာခြင်း (The Emancipation of Mimi) အခွေဖြင့် ဂီတဇယားထိပ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ယင်းအခွေသည် ၂၀၀၅၏ ဒုတိယမြောက်ရောင်းအား အကောင်းဆုံးအခွေဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုအခွေမှ ဒုတိယသီချင်း တို့နှစ်ဦးသား အတူတူ (We Belong Together) သည် ၂၀၀၀ပြည့်နှစ်များ၌ အမေရိကတွင် အကောင်းဆုံးသီချင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၉၌ ပရိသတ်လက်ခံမှုကောင်းသောရုပ်ရှင် Precious တွင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ကာ Palm Springs International Film Festival ၌ သူမ၏ အောင်မြင်သော အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်ဆု ရယူနိုင်ခဲ့သည်။
သူမ၏လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သော သက်တမ်းတစ်လျှောက် ကဲရီသည် ကမ္ဘာအနှံ့ သီချင်းခွေရောင်းအား သန်း(၂၀၀)ကျော်ရောင်းချခဲ့ရသဖြင့် သမိုင်း၌ ရောင်းအားအကောင်းဆုံးအနုပညာရှင်များထဲကတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဘီလ်ဘော့ဒ်ဇယား ရေပန်းစားသီချင်း(၁၀၀)၌ စုစုပေါင်းသီချင်း (၁၉)ပုဒ်သည် အဆင့်(၁)ရရှိမှုနှင့်အတူ ကဲရီသည် တစ်ကိုယ်တော်အဆိုတော်၊ အမျိုးသမီးတေးရေးသူ၊ အမျိုးသမီးတေးထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးမှ အဆင့်(၁)သီချင်းအများဆုံးရသော စံချိန်ကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ အမေရိကန်တေးသံသွင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့ (RIAA)အရ သူမသည် အမေရိက၌ တရားဝင်အသိမှတ်ပြုခံရဆုံး(ရွှေအဆင့်၊ပလက်တီနမ်အဆင့်..စသည်) ဒုတိယမြောက်အမျိုးသမီးအနုပညာရှင်ဖြစ်သည်။ RIAA အသိမှတ်ပြု တေးအယ်လ်ဘမ်ချပ်ရေ ၆၆.၅သန်းရောင်းချခဲ့ရသည်။ ၂၀၁၂တွင် သူမကို VH1 ၏ ဂီတနယ်ပယ်တွင် အကြီးကျယ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်(၁၀၀) ထဲတွင် ဒုတိယအဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၉တွင် ဘီလ်ဘော့ဒ်က သူမ၏ ဖျော်ဖြေမှု၊ သီချင်း၊ အခွေများကို အခြေခံကာ အမေရိက၌ သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံး ထိပ်တန်းအမျိုးသမီးအနုပညာရှင်အဖြစ် သတ်မှတ်ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ အကျိုးမြတ်ပိုင်းအောင်မြင်မှုများအပြင် ကာရေးသည် ဂရမ်မီဆု ငါးဆု၊ ကမ္ဘာ့ဂီတဆု (၁၉)ဆု၊ အမေရိကန်ဂီတဆု (၁၀)ဆု နှင့် ဘီလ်ဘော့ဒ်ဂီတဆု (၁၅)ဆု အသီးသီးရရှိခဲ့သည်။ တေးရေးသူဂုဏ်ပြုချီးမြှောက်မှု (Songwriters Hall of Fame) ကိုလက်ခံရရှိခဲ့ကာ သူမသည် ပေါ့ပ်ဂီတ နှင့် ခေတ်ပြိုင်အာအန်ဘီဂီတနယ်ပယ်ရှိ အခြားအနုပညာရှင်များကို လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သဖြင့်လည်း ကျော်ကြားသည်။
↑ Ngomsi၊ Vinciane (September 14, 2018)။ "Mariah Carey hasareported net worth of $520 million — here's how the pop singer earned it all"။ Business Insider။ June 10, 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Trust၊ Gary (December 16, 2019)။ "Wish Come True: Mariah Carey's 'All I Want for Christmas Is You' Hits No. 1 on Hot 100 After 25-Year Wait"။ Billboard။ December 16, 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ RIAA (February 25, 2019)။2#Diamond albums,7#multiPlatinum albums,4#Platinum albums,2#Gold albums. Only ONE @MariahCarey #BlackHistoryMonth။
↑ Mariah Carey on Being the Top Female Solo Artist of All Time (2019-11-14)။
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named amas
↑ Mariah Carey to Perform at 2015 Billboard Music Awards။ Billboard။ May 9, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Mariah Carey to be inducted into Songwriters Hall of Fame (in EN)။
↑ David၊ Sara; Kwateng-Clark၊ Danielle (November 19, 2018)။ "Put Some Respect on Mariah Carey's Good Name"။ Vice။ May 19, 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မရိုင်းယား_ကဲရီ&oldid=725255" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၀:၁၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။